Sintomy ny rindrina ao amin'ny Huawei Mate 10 Pro | Androidsis
Isaky ny mamoaka fitaovana vaovao eny an-tsena ny mpanamboatra, toy ny fitsipika lna miaraka amina sary miavaka maromaro ary namboarina mba hanehoan'ny efijery antsika ny toetra tsara indrindra ananany. Andro vitsy lasa izay, fotoana fohy taorian'ny fanombohana ny OnePlus 5T, tao amin'ny Androidsis nohazonintsika ny sary an-tsary mba hahafahan'ny tsirairay aminareo mametraka azy io amin'ny fitaovantsika na inona na inona ny maodely.
Ankehitriny dia anjaran'ny Huawei Mate 10, terminal misy azy Huawei dia naneho fa afaka manao zavatra tsara ary tsy manana tahotra ny ho lasa mpisolo toerana ny avo lenta nentin-drazana izy, na Samsung na Apple. Eto izahay dia asehonay anao ny sary manaitra mahatalanjona izay tonga avy amin'ny faran'ny Huawei farany sy lehibe indrindra.
Wallpaper rehetra, Izy ireo dia mitovy amin'ny vahaolana izay hitantsika ao amin'ny Huawei Pro 10, miaraka amin'ny vahaolana 2160 x 1080. Ity terminal ity dia manome antsika efijery Full HD + misy efijery 6-inch ary teboka 402 isaky ny santimetatra. Ao anatiny no ahitantsika ny processeur Huawei HiSlicon Kirim 930, miaraka amin'ny RAM 4GB sy fitehirizana anatiny 64GB.
Ny isan'ny sary an-tsary an'ny Huawei Mate 10 Pro dia mahatratra 18 ary aiza no ahitantsika ny loko mafana ka hatramin'ny loko mangatsiaka, izy rehetra dia natao hanasongadinana ny kalitaon'ny efijery ampiasaina amin'ity fitaovana ity, miaraka amin'ny vahaolana, araka ny nanamarihako bebe kokoa etsy ambony. Mba hahafahanao misintona azy ireo dia mila tsindrio fotsiny ny afara izay tianao sy eo ambany, tadiavo ny safidy hampidinana azy amin'ny habeny tany am-boalohany.
Fa raha te hitahiry ny vola rehetra miaraka amin'ny fitaovanao na amin'ny solosaina ianao amin'izay amakianao ity lahatsoratra ity dia azonay ampiasaina ny rohy manaraka, aiza se mahita ny fisie rehetra voageja ao anaty rakitra iray mitahiry ao amin'ny MEGA.
Tianao ve Wallpaper 3d? Ao amin'ny rohy izay navelanay fotsiny dia hahita fanangonana be dia be ianao hanamboaranao manokana ny findainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Sintomy ny rindrina ao amin'ny Huawei Mate 10 Pro
Ny lalao polisy tsara indrindra ho an'ny Android